तपाईं अक्सर आफ्नो कम्प्युटर अन्तिम रात बन्द गरिएका छन्, र आज समावेश र डाउनलोड गरेपछि सबै लेबल देखि गएका छन् देख्न सक्नुहुन्छ कल्पना, तपाईँको डेस्कटप! के भयो? जहाँ सबै गएका छन्? नआत्तिनुहोस्, आफ्नो साथीको कम्प्युटर यो अनौठो व्यवहार लागि कारण धेरै हुन सक्छ। यस लेखमा हामी के भयो बुझ्न प्रयास गर्नेछ, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, कसरी फिर्ता हराएको प्रतीक प्राप्त गर्न।
पूर्ण डेस्कटप सबै सर्टकटहरू बेपत्ता, र यो एक प्राचीन खाली छ भने, यो कारण धेरै सरल छ, र यो "समस्या" समाधान गर्न पनि एक बच्चा गर्न सक्षम छ भन्ने सम्भव छ। तर शायद फरक, यो यी लक्षण ठूलो समस्या संकेत गर्न सक्ने छ। का साँच्चै के भयो पत्ता लगाउन सुरु गरौँ।
पहिलो सम्भव कारण
त्यसैले, तपाईं डेस्कटप देखि सर्टकटहरू गुमाए भने, तपाईं के गर्नुपर्छ पहिलो कुरा - जाँच गर्न, सायद केही जोकर बस रद्दीटोकरीमा तिनीहरूलाई हटाइएको छ। तपाईं के भने त्यहाँ एक पासवर्ड छ र काम मा आफ्नो अन्य सदस्यहरु वा सहकर्मी पहुँच, त्यसपछि यो विकल्प उपयुक्त हुन्छ। त्यहाँ एक गलतफहमीले यहाँ अप्रिय छ भनेर पक्का कसरी? धेरै बस, डेस्कटप नयाँ फोल्डर वा फाइल बनाउन। सबै सामान्य मोडमा छ, र त्यो आफ्नो स्क्रिनमा देखिन्छ नयाँ वस्तु तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसैले साँच्चै कसैले तपाईँको लेबल हटाइयो।
तर जब वस्तु सिर्जना, तर आफ्नो डेस्क को काम मा छैन देखिने छ, त्यसपछि perehodimk कारण नम्बर दुई।
यो एक व्यक्ति डेस्कटपबाट उहाँले सर्टकटहरू गएको र कम्प्युटर आउन गर्दा उहाँले गल्ति खाली ठाउँ मा सही बटन थिचिएको र छनौट गर्न "प्रतीक लुकाउनुहोस्" ड्रप-डाउन मेनुमा विकल्प कि बाहिर जान्छ छ भनेर भन्छन्, म एक तस्वीर देखेको छ धेरै कसरी समय छैन।
Vindous XP अन्तर्गत यो जाँच एकदम सरल छ, मेनु वस्तु "आदेश" होभर डेस्कटपमा दायाँ-क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ, "प्रतिमा प्रदर्शन" विरुद्ध चेक मार्क छ यो सेट छ भने, हटाउनुहोस्।
Vindous7कार्यप्रवाह मा पनि सजिलो, दायाँ "दृश्य" मेनुमा जानुहोस् र त्यहाँ एक निशान छ कि जाँच तालिका क्लिक गर्नुहोस्। यो छ भने - हटाउन र प्रतीक देखा आनन्दित।
तर यदि यो काम गर्दैन, त्यसपछि तपाईँले तेस्रो बिन्दु उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।
अरू सबै असफल भएमा र तपाईं अझै पनि स्क्रिनमा सबै नै शून्य हेर्न भने निश्चित भाइरस, जो प्रसंगवश सम्भवत आफ्नो कम्प्युटर आक्रमण छ (र यो हुन्छ), वा जानीबुझी (जो प्राय हुन्छ) बनाएका तपाईं सर्टकटहरू हराउने डेस्कटप देखि।
यहाँ यो आवश्यक जोड गर्न, तेस्रो कारण हो - एक नियम, पूर्ण लोप रूपमा छ। तिनीहरूले मात्र होइन सर्टकटहरू गुमाए, तर पनि "सुरुवात" मेनुमा र तल उपकरणपट्टी।
जो कारण लागि, जब, यो हुन्छ "एक्सप्लोरर", प्रक्रिया सिस्टम सुरुवातमा मना गर्यो। तर प्राय यो कुनै पनि भाइरस रोक्छ।
यो सबै सर्टकटहरू र कार्यपट्टी "सुरुवात" मेनुमा लागि जिम्मेवार छ देखि।
कम्प्युटर सहयोग गर्न, तपाईं निम्न गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रबन्धक कल। XP मा, सात Ctrl softkey, Vindous + Alt + Ctrl softkey delet क्लिक + Shift + भागो।
त्यसपछि, "फाइल" मा क्लिक गर्नुहोस् "नयाँ टास्क> रन।"
यसले "Explorer.exe" डायल गर्न (को पाठ्यक्रम, उद्धरण बिना) र "ठीक" मा क्लिक गर्नुहोस् आवश्यक छ जसमा एक विन्डो खुल्छ।
सही क्रममा गरेको, यी सबै कदम देखा र सबै सर्टकटहरू र सबै प्यानल संग "सुरुवात" मेनुमा आफ्नो डेस्कटपमा एक पटक।
तर तपाईं त्रुटि को फलस्वरूप भने "फाइल फेला परेन" (यो पनि हुन्छ), त्यसपछि फाइल दूषित छ कि त वा यो सिस्टम मा अवस्थित छैन। कसरी उहाँको फिर्ता प्राप्त गर्न? सरल र छिटो (अर्को लागि अनुरोध र छडी देखि लेखन विंडोज फोल्डरमा) वा प्रारम्भिक ओएस स्थापना समयमा प्रयोग भएको थियो कि डिस्क देखि स्थापना - त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन्।
त्यसपछि निश्चित हुन आफ्नो कम्प्युटर जाँच एन्टिभाइरस उपकरण, यो परिणाम आकस्मिक छैन, तर भाइरस कार्यक्रम को गतिविधि कारण सम्भव छ।
तपाईंले सही काम गर्न "प्रणाली पुनर्स्थापना" एक उपयोगी उपकरण छ भने, तपाईँले यसलाई चाँडै सबै समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
म यस लेखमा मार्फत, तपाईं आफ्नो पीसी को डेस्कटपमा जहाँ हराइरहेको सर्टकटहरू बुझ्न हुनेछ भन्ने आशा।
आफ्नो साइट सामाजिक बुकमार्क। सामाजिक बुकमार्क
कसरी फन्टहरू को स्थापना गर्छ
यदि ध्वनि काम गर्दैन
फ्लैश ड्राइव खोल्न गर्दैन - के? फ्लैश ड्राइव पहिचान छ तर खोल्न छैन
मा लिनक्स मेल सर्भर: सिंहावलोकन र सेटअप
Shushary सेन्ट पीटर्सबर्ग मा नयाँ भवन। Shushary, सेन्ट पीटर्सबर्ग: बिल्डर नयाँ विकास - समीक्षा, फोटो
रूसी संगीत आलोचक र टिभीमा प्रस्तोता Artem Vargaftik - जीवनी, जीवन र क्यारियर
म चिल्ला, कारण, जोखिम कारक र विशेषज्ञ सल्लाह देखि एचआईभी प्राप्त गर्न सक्छन्
ग्लास को प्रतिस्थापन मा आईप्याड मिनी कस्तो छ? स्याउ सेवा केन्द्र
मानिसहरू किन झूट गर्छन्?